उप निर्वाचनः काँग्रेसी फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उम्मेदवार आङ्देम्बे विजयी बन्लान् त? - Sainokhabar
होमपेज / प्रदेश / प्रदेश १ / उप निर्वाचनः काँग्रेसी फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उम्मेदवार आङ्देम्बे विजयी बन्लान् त?
उप निर्वाचनः काँग्रेसी फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उम्मेदवार आङ्देम्बे विजयी बन्लान् त?
पान्थर । प्रदेश १ को पूर्वी जिल्ला पान्थर यतिबेला चुनाबी रौनकता बढ्दो छ । जिल्लाको फाल्गनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक दलहरुलाई भ्याइनभ्याई छ । ती दल मध्ये दोस्रो ठूलो दल, पालिकाको पहिलो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका बृजहाङ नेम्बाङले के चुनाब जित्ला ? पालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङले रुख चिन्हबाट चुनाब जिते झै कांग्रेस वा नेम्बाङले विजयीको झण्डा फरफराउला ? प्रश्न यतिखेर चर्चामा छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा १४ हजार ७ सय आठ मतदाता मध्ये अमरकुमार नेम्बाङले ४ हजार १ सय ६३ मतले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सो चुनाबमा कांग्रेसले उपाध्यक्षमा देवित्रा कुमारी आङ्देम्बेसहित बहुमत २ वडा बाहेक सबै वडामा विजयी हासिल गरेको थियो । वडा नम्बर १ मा होमप्रसाद आङ्देम्बे, वडा नम्बर ३ मा सुखवीर नेम्बाङ, वडा नम्बर ५ मा अविन्द्र प्रसाद चेम्जोङ, वडा नम्बर ६ मा नारायण प्रसाद आङ्देम्बे र वडा नम्बर ७ मा लिला बल्लब नेपालले सानदार चुनाब जितेको थियो भने एमालेबाट वडा नम्बर ४ मा मनबहादुर चेम्जोङ, नेकपा मालेबाट वडा नम्बर २ मा बहादुर सिंह नेम्बाङले चुनाब आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो ।
पालिकाको वडा नम्बर ७ पिपलबोटेमा परिवारको माहिलो छोराको रुपमा आङ्देम्बेको जन्म २०२९ सालमा भएको हो । आङ्देम्बे विद्यार्थीकालदेखि नै काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । आङसराङको जयनारायण माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका आङ्देम्बेले दमक क्याम्पसबाट राजनीति शास्त्र बिषयमा आईए सम्मको अध्ययन गरेका छन् । २०५१ सालमा उनी नेपाल विद्यार्थी संघबाट दमक–पाँचथर सम्पर्क समितिको संयोजक भएर काम गरे । २०५१ सालमा क्रियाशिल सदस्य बनेका आङ्देम्बेले नेवि संघ र तरुण दल पाँचथरको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका छन् । काँग्रेसको १२ औँ अधिबेशनदेखि उनी पार्टीको जिल्ला राजनीतिमा उदाएका हुन् । १२ औँ अधिबेशनबाट जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित बनेका आङ्देम्बेलाई मनोनित गरेर सह–सचिव बनाइएको थियो । १३ औँ अधिबेशनमा पनि जिल्ला सदस्य निर्वाचित बनेका आङ्देम्बेलाई सचिवमा मनोनित गरिएको हो । नरम र मिलनसार स्वभावका आङ्देम्बे कांग्रेसी माझ प्रिय छन् ।